Blockchain News 9 Ndira 2018 - Blockchain News
Cryptocurrency Mitemo dzichitaurwa muna Vermont
A mamiriro muparamende mu Vermont yave aronga rugwaro kuumba idzva pamutemo yemibvunzo nokushandiswa blockchain michina.
Kuwedzera mandating mishumo kanoverengeka cryptocurrencies uye blockchain, izvozvo zvikurukuru chinotsanangura kuti vaisagona patsanura zvimwe yemakambani sezvo “digitaalinen mari shoma kuita makambani,” kunyanya avo kuti ushande network dzavo.
Makambani iwayo wakaramba, kana bhiri iri mvumo, bhadhara “ari muchimiro kwayo digitaalinen mari kutengeserana mutero yakaenzana $ 0.01” pose chikwata chitsva cryptocurrency akasikwa, mhindu kana Kutamiswa.
“A kambani digitaalinen mari shoma kuita anosunungurwa kubva mitero zvimwe zvinoshanda” anoverenga bhiri.
Bhiri mutsva rinoda “Fintech Summit,” izvo aizounza pamwe chete nehurumende uye maindasitiri wekuongorora kukurukura sei Vermont anogona kusimudzira rakasiyana kushandiswa iri Tech wacho. Hurumende aizotsaura $25,000 kubatsira mari yacho chiitiko, pasi auspices of Agency of Commerce uye Community Development.
JPMorgan Chase CEO Jamie yeDhimoni zvikunguro vachiti Bitcoin ndiye munyengeri
JPMorgan Chase sachigaro & CEO Jamie yeDhimoni akati Chipiri anozvidemba mhinduro zvekare umo akadana Bitcoin ari munyengeri ari September rwezvemabhengi musangano.
Panguva, YeDhimoni akati kuti moto JPMorgan vatengesi kana vakatenga nhumbi vari crypto-mari.
"The misa cheni ariko. Unogona kuva crypto Yen uye madhora uye zvinhu zvakadaro…"YeDhimoni akati imwe chete pakabvunzurudzwa Fox Business.
The bitcoin kwandiri nguva dzose chii hurumende dziri gonna vanonzwa pamusoro bitcoin rikawira sezvo chakakurisa, uye ini chete maonero akasiyana pane dzimwe vanhu. Handifariri kuti zvikuru nyaya zvachose.
US Federal Reserve Bank President: Bitcoin haisi chakavimbika mukwikwidzi kuna US Dollar
Bitcoin nevamwe digitaalinen dzeEurope hadzibudisi kuchikosha kutyisidzira U.S. dhora, Minneapolis Fed President Neel Kashkari akati.
“Handioni bitcoin somunhu chakavimbika mukwikwidzi kuti dhora muUnited States of America, uye chikonzero ndiye chipingamupinyi hwokupinda kwamuri nokusika pachako mari yako uye ini ndinosika yangu rakapotsa mari … ndiyo razero,” Akati panguva rekuratidzwa muna Minnesota.
Kashkari akabvuma kuti bitcoin nezvimwe cryptocurrencies anogona kutora rimwe basa guru munyika yose munguva yemberi, asi wakati kuti ikozvino vanoramba mubvunzo chiratidzo.
“Saka pane zvose izvi itsva alt mari zvaakasikwa ose zuva, uye apo unogona kutaura pane chete BitCoins zhinji zvokuti kuenda kuti mined, kana chinozadzwa muddled zvose izvi zvimwe alt mari unogona achiri mitengo, nekuti hauzivi ndeapi kuvimba,” akati. “I chimbofunga izvi ane refu nzira mberi tinoziva sei izvozvo anozunungusa kunze.
Bitcoin neramangwana musika yakazaruka nokuda Thailand kuti vanoita
Phillip kuchengetedzeka Thailand akabvumira Thai vanoita kuti raizoshanda bitcoin Via munyika yose nomukaka wokutengesera basa, apo Thailand kuti misika regulators vari vabvumirana kuti kutama kwepamutemo.
basa kwakadaro inopa bitcoin neramangwana dzokutengeserana pamusoro Chicago Board Options Exchange (CBOE) uye Chicago Mercantile Exchange (CME).
Yamaneja Low See Kiong akati vamwe vanoita Thai vanofarira bitcoin uye anokwanisa kugamuchira mari ngozi tinoberekwa neramangwana.
“Achishandisa bitcoin somunhu dambudziko twa pamusoro CBOE uye CME ichaita kuti kubvuma bitcoin neramangwana zvikuru sezvo vane yakavimbika muripo gadziriro uye vari nokudzorwa US kuchengetedzeka uye Exchange Commission,” Mr Low akati mupepanhau.
“Sezvo izvi [inivhesitimendi] chigadzirwa iri pasi pokudzora munhu kwezvipimo pamutemo muviri, pfungwa kunetseka hazvisi kwete pamusoro kubiridzirwa kana mari laundering, asi zviri nani sei chigadzirwa ichi aine njodzi,” akati mashoko.
Prime Minister Prayut Chan-u-Cha achangobva akarayira rezvemari kudzidzisa vanhu maererano nengozi bitcoin inivhesitimendi.
Switzerland anotangazve Blockchain basa simba
Hurumende Swiss wakatanga kurwisa boka idzva kuumba ayo pamutemo framework dzakapoteredza blockchain startups uye ICOs.
Taskforce Blockchain - kutungamirirwa rezvemari Ueli Mausrer uye Economics uye Education Minister Johann Schneider-Ammann - inosanganisira yeUnited uye nemakanzuru machinda, uyewo nhengo dzakasiyana-siyana blockchain startups uye vamiririri pamutemo, maererano igwaro.
Boka vachatarira yepamutemo nhungamiro akapoteredza ICOs uye blockchain makambani, pandaishanda State Secretariat for International Financial Dzemari - yeUnited muviri mutoro pakutevedzera musika zvemari mutemo uye achimiririra hurumende zvido zvemari kuyambuka miganhu.
Schneider-Ammann akarumbidza kwebasa rinofanira blockchain makambani ari kukurukura dzakapoteredza kuumbwa yavo zviri pamutemo.
akawedzera: “Blockchain kuri kukosha sechinhu zvemichina kuti maindasitiri mazhinji, kwete crypto mari. Chinodikanwa ndiko worupo murau, izvo inovhura mikana Switzerland nezvetsika panguva iyoyowo yokuderedza pangozi.”
Musangano The Taskforce Blockchain yokutanga vachava pamusoro Jan. 12, 2018.
First muedzo kukumbira rechikepe akabvuma
A-refu amire kupfimbwa kuunza “akangwara” akangwara zvibvumirano kuti mambure chikuru bitcoin kwakaita achangobva atora rimwe danho pedyo Implementation.
Developers vanozviisa pasi mumwe muedzo kukumbira Merkelized Abstract nemarongerwo Miti (rechikepe), chokuguma nguva yokutanga ino vakachenjera zvibvumirano kupfimbwa yave nyaya imwe muedzo chikumbiro kutsvaka kusangana yawo bitcoin kuti bumbiro.
Izvi private akangwara zvibvumirano aizorega vanoshandisa chidzore dzavo nzira iyo muripo kuti ironge, kugonesa siyana zvinoita waongororwa chepurogiramu. The akangwara zvibvumirano zvaizobva zvandakatonga hwavo.
Tikafunga BIPs kwaizoratidzawo achibvumira kuti akangwara zvibvumirano izvi kuti zvikachenge- chitsidzo netsika pamusoro chaiko bitcoin blockchain, zvichireva havana kutora yakawanda misa nzvimbo, kana uwandu mashoko inogona kuchengetwa mukati neimwe block kwema.
Kana Developers uye yakakura bitcoin munharaunda kufarira shanduko, raigona kuwedzerwa bitcoin nenzira imwe nyoro forogo.
A mabviro news.hodlhodl.com
Previous Post:Teregiramu ICO zvirongwa
Next Post:Ndiani akaita chikuru mupiro kuna crypto indasitiri? pamusoro 7